ARAGTIDA SHARCI EE XUKUUMADDA XIL-GAARSIINTA | KEYDMEDIA ONLINE
Sida aan wada ogsoonahay Golaha Shacabka BFS ayaa kalsoonidii kala noqday Xukuumaddii uu hogaaniyay Mdne:Xasan Cali Kheyre taariikhdu markey ahayd 25-tii Luuliyo 2020. Wuxuu Golaha Shacabku codka kalsoonida siiyay 1-dii Maasrso 2017.
Haddaba Si looga jawaabo su’aalaha sare ku xusan, loona fahmoqoramada, waxaan soo bandhigaynaa macnaha iyo sharci ay ku tiirsan tahay xukuumadda xil-gaarsiinta (Caretaker Government) kadibna waxaan dul istaagaynaa mabaad’ida Dastuurka iyo shuruucda kale ee Dalka anagoo raad-raac ku samaynayno sooyaal Dastuur iyo nidaamka dowladeed ee uu dalku lahaan jiray, sidoo kale haddii ay jirtay fasiraad Dastuur oo arrintaas la xiriirta oo ay horey u go’aamiyeen hay’adaha garsoorka dalka.
1. Marka muddo xileedka xukuumaddu dhammaado oo doorasho la’aado, waxaa arrintaas nidaaminaya Qod.103 ee Dastuurka KMG.
2. Haddii Golaha Shacabka ee BFS uu kalsoonida kala noqdo xukuumadda sida ku cad Qod.69/2/E ee Dastuurka KMG.
3. Hadduu Ra’isul Wasaaruhu geeriyoodo ama is-casilo ama uu gudan waayo xilkeesa sababo caafimaad sida uu jidaynayo Qod.90/d iyo 97/4 ee Dastuurka KMG.
Dastuurkii 1960-kii wuxuu tilmaamay in markaBaarlamanku kalsoonida kala noqdo xukuumadda ay ay is-casilayaan dhammaan xubnaha xukuumadda, waxay se sii-haynayaan howlihii socday ilaa laga soo magacaabayo xukuumad cusub, waxaa sidaa caddeynaya Qod.82aad ee Dastuurka.
(Cabinet handbook- paras 2.27 to 2.31).
Marka aan tixraac iyo raac-raac ku sameeyno falanqeyntii iyo faaqidaadihii aan sare ku soo sheegnay, sidoo kale aan soo xiganno aragtida Dastuur iyo midda sharci ee xukuumadda xil-gaarsiinta –guud ahaan dalalka ku dhaqma nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka isku-dhafka – waxaa inoo soo baxay in xukuumadda xil-gaarsiinta ay yeelanayso awoodaha iyo xilalka soo socd
1. Socod-siinta howlihii ama shaqooyinkii socday (routine duties) ee la xiriira maamulka guud iyo adeegga bulshada ama haddii aan si kale u dhigno howl-maalmeedkii hay’adaha maamulka guud ee dowladda.
2. Arrimaha u baahan in si degdeg ah wax looga qabto ee la xiriira danta guud, haddii aanay caqabad ku noqonayn xukuumadda la magacaabayo ama aysan abuurayn qalalaase iyo khilaaf siyaasadeed.
3. Xaqiijinta doorashada marka mudda xileedka xukuumadda dhammado, lana galo doorashada iyo ka shaqeynta dhisidda xukuumad cusub.
4. Fulinta barnaamijyada iyo howlihii ay horay go’aannada uga qaadatay xukuumadda dhacday ama waqtigeedu dhammaaday.
1. Soo-jeedinta wax ka beddelka Dastuurka.
2. Curinta ama soo gudbinta hindise ama mashruuc sharciyeed.
3. Soo saaridda qaraarro ama go’aanno tilmaamaya wax-ka-beddelka qodobo sharci.
4. Kala diridda Baarlamaanka.
5. Go’aanno wax ka beddelay qaab-dhismeedka hay’adaha iyo mu’assasaadka guud ee dowladda.
6. Qaraarro ama go’aanno wax ka beddelaya xeer nidaamiyeyaasha dowladda.
7. Qaraarro ama go’aanno wax ka beddelaya ama ku xadgudbaya xuquuq uu ay aqoonsadeen Dastuurka iyo Shuruucda Dalka.
8. Magacaabid xil leh ahdaaf siyaasadeed aad u fog.
9. Jaangoynta qiimaha badeecada, mushaaraadka iyo adeegyada kale ee saamaynaya dhaqaalaha qaranka.
10. Go’aanno abuuray qalalaase ama khilaaf siyaasadeed.
11. Gaaridda go’aanno siyaasadeed oo caqabad ku noqon kara xukuumadda imaanaysa.
12. Qabashada afti dadweyne.
13. Ansixinta hindise sharci oo qabyo oo la xiriira miisaaniyadda dowladda.
14. Curinta siyaasad ama barnaamij cusub oo ay yeelanayso xukuumaddaxil-gaarsiinta ama wax ka beddelka siyaasaddii hore ee xukuumaddu ku shaqeynaysay.
15. Gelidda heshiisyo caalami ah ama kuwo waqti dheer qaadanaya oo saamaynaya siyaasadda xukuumadda cusub.
16. Magacaabidda ama xil ka qaadidda saraakiisha sar-sare ee dowladda
Qareen Zakariya I. Nuur waa qareen, bare Jaamacadeed iyo cilmi-baare ka howl-gala Magaalada Mugdishu, wuxuu xubin ka yahay Ururka Qareennadda Soomaaliyeed, wuxuu sidoo kale La-taliye sharci u yahay hay’ada dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay